Ahoana ny fampiasana ny asan'ny Handoff amin'ny Mac taloha tsy misy Bluetooth 4.0 | Vaovao IPhone
Ahoana ny fampiasana ny endri-javatra Handoff amin'ny Mac taloha tsy misy Bluetooth 4.0
Rehefa nampiditra ny OS X Yosemite i Apple, dia voatafika isika, ankoatry ny fiovan'ny hatsarana izay mampifanaraka ny endrika fisaka amin'ny fomban'ny iOS 7, ireo fiasa vaovao toa ny Continuity sy Handoff. Araka ny efa niseho tamin'ny fampisehoana ny Apple Watch, izay voahodidin'ny fisalasalana maro mbola anisany ny daty misy eo amin'ny tsena, Apple tsy nilaza momba ny fepetra takiana amin'ny Mac afaka mampiasa ireo fiasa vaovao voalaza etsy ambony.
Tamin'ny volana oktobra lasa teo raha afaka nisintona tamin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana ny OS X Yosemite izahay, maro ireo mpampiasa, anisan'izany ny tenako ary koa mpamaky maro hafa, no nikiakiaka tany an-danitra rehefa nahita ny fomba tsy nisy tamin'ny Macs taloha ny fiasa sasany. Hadoff, izay ahafahantsika manohy izay ataontsika amin'ny iPad / iPhone amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny famelana azy fotsiny, dia nitaky ny hanana ilay Bluetooth resahina 4.0.
Ny olana voalohany dia avy amin'ireo mpampiasa izay manana Bluetooth 4.0 (LMP Version: 0X6) amin'ny solosain'izy ireo saingy Apple dia nanidy ity fampiasa ityfa misaotra ny rindrambaiko Continuity Activation Tool azo alaina ao amin'ny sehatra GitHub, afaka niatrika an'io olana io izahay.
Ny olana faharoa dia avy amin'ireo mpampiasa izay tsy manana Bluetooth 2.0. Ireo mpampiasa ireo Tsy afaka nampiasa an'io asa vaovao io izy ireo na nanampy USB usb akory, satria tsy navelan'ny Apple ny fampiasana azy satria tsy nosoniavin'izy ireo izy io. Saingy ireo olana rehetra ireo dia nifarana noho ny ekipa iray ihany izay namaha ny olana tamin'ny Macs tamin'ny Bluetooth 4.0 izay nahazoana io fiasa io. Eto ambany ianao dia afaka mahita graf miaraka amin'ireo Mac rehetra mifanentana amin'ny vahaolana amin'ity ekipa GitHub ity.
Raha te-hisintona an'ity rindranasa vaovao ity izay mamela alefaso ny HandOff amin'ny Mac taloha amin'ny usb bluetooth no mila ataonao kitiho eto ary araho ny torolàlana eo amin'ny efijery. Aza miraharaha na mandà raha toa ka mipoitra ilay hafatra hoe "Fahazoana miditra amin'ny endri-javatra azo idirana.
Ahoana ny fiasan'ity asa vaovao ity somary mikorontana ihany amin'ny Mac tohana, koa aza antenaina ny hiasa tanteraka amin'ny fampiasana hazo USB usb ivelany. Ity ambany ity dia afaka mahita lisitra nohavaozina miaraka amin'ny filàna sy ny vahaolana amin'ireo maodely Mac rehetra hahafahana mampiasa ny asan'ny Handoff.
Saingy alohan'ny fihazakazahana hividy ny spike Bluetooth USB voalohany hitantsika ao amin'ny fivarotana solosaina mahazatra, tsy maintsy dinihintsika izao manaraka izao:
Tokony hanana ny puce Cambridge Silicon Radio CSR8510 A10 izy ireo
Manoro hevitra anao ny hitady ireo izay mampiditra Broadcom BCM20702 satria mitovy amin'ny ampiasain'ny Apple amin'ny Macs mifanentana amin'izao fotoana izao izy ireo nefa tsy mila fampiharana an'ny antoko fahatelo.
Raha mijery ny maodely Asus BT400, IOGEAR GBU521 ary GMYBLE izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Ahoana ny fampiasana ny endri-javatra Handoff amin'ny Mac taloha tsy misy Bluetooth 4.0
Id4n dia hoy izy:
https://github.com/dokterdok/Continuity-Activation-Tool/ Ka sosotra ka mahazo ny loharanom-baovao?
Valiny amin'ny Id4n
Olana SEO ireo fa tsy ahy. Ary raha milaza zavatra tsy misy dikany ianao toa ny efa nandika sy nampita ny lahatsoratra tany am-piandohana izay hisehoako, dia ho iray amin'ireo fiteny roa tsy azonao izany. Mazava ho azy fa maro ny olona tsy mahay teny anglisy ary manandrana mamindra ny fampahalalana sary amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tsy azoko ny tianao ambara. Milaza ny vaovao fa azo jerena ao amin'ny GitHub ary koa ny rohy fampidinana dia avy amin'ny GitHub. Fa maninona no lazainao fa tsy napetraka ny loharano?